I-BRENT Bounces kwiNkxaso ephambili
Inkxaso ephambili: 70.70
Ukuxhathisa okuphambili: 72.00
Intlanganiso yokugqibela ye-OPEC yemvumelwano yayikukukhupha imveliso kule ntwasahlobo nasehlotyeni nge-2.1 yezigidi ze-bpd (imiphanda ngemini). Ukubuyela kwe-Iran kwimarike yeoyile kungaphantsi kokuqinisekileyo ngommiselo kumandla abo enyukliya kulibazisekile kwaye kunzima kakhulu ukongamela.
Ibango leemveliso zepetroleum ezisisiseko zihlala zikhula njengoko uqoqosho luvulwa ngokupheleleyo emva kwemizamo yokugonya kunye nezithintelo zohambo lomoya ezibuyela esiqhelweni.
Imfuno ephezulu yeemveliso zepetroleum iqhuba amaxabiso okwangoku ngonikezelo olunqunyelwe yi-OPEC ngexesha lobhubhane ukuxhasa amaxabiso kunye nentengiso iyonke.
Ukuthetha kwezobuchwephesha iBrent iyalile indawo yethu yokuthenga amandla. kunye nepivot yeveki nganye ngelixa uprinta ukungafani okunyukayo okunyukayo. Urhwebo lwethu apha kukuthenga ekubuyiseleni kwakhona kuluhlu lwangoku kwimarike enkulu yokuthengisa.
I-BRENT ibuyisa umva kwifom yangaphambili
Inkxaso ephambili: 69.00
Ukuchasana okuphambili: 69.90 - 70.90
Besijonge iBrent kwezi veki zimbalwa zidlulileyo kwaye sijonge ithuba lokuhamba ixesha elide ukukhwela le ntshukumo inamandla. Ukusuka kwiindawo eziphakamileyo iBrent ibuyise umva nge-6.8% kwaye yabuya kwi-pivot yeveki.
Uhlalutyo lwetshathi lwe-15M
Ngexesha leseshoni yaseAsia iBrent yabuya ukuvavanya inqanaba lokuthengisa le-69.00 ngaphakathi kwiflegi. Sinexesha elide kwikhefu leflegi kumthamo wokuthenga okuphezulu kunye nokwahluka okunyanzelekileyo okuprintwe kumaxesha asezantsi.
Ukuseta okuqhubekekayo kokuqhubekeka kwinqanaba eliphambili.
UBrent uyalahla ukuphakama kukaFebruwari
Ukuhlaziywa: 9 Matshi 2021
Inkxaso ephambili: 67.50
Ukuchasana okuphambili: 69.60 - 70.50
I-Brent yomelele kakhulu ekubuyiseleni kwayo kubhubhane owathathayo amaxabiso e-oyile (WTI) isizathu sokuba i-Brent ingachaphazeleki kungenxa yokuba iikontraka ze-Brent zexesha elizayo zihlawulwe ngekheshi.
Ngokuvulwa kwakhona kwezoqoqosho kunye nohambo lomoya, imfuno yeemveliso zeoyile ekrwada inyuka ngokukhawuleza ngeli lixa ubonelelo lusahleli lungekho. Oku kwenza uxinzelelo lwe-bullish kule marike kwaye nantsi apho sifuna ukungena khona.
1H itshathi yohlalutyo
Izolo amaxabiso eBrent ehle nge-5.40% ukusuka kwiindawo eziphakamileyo ezophula ulwakhiwo lwexesha elifutshane kunye nokubambisa phakathi ukuya kwiibhere zexesha elide kwinkqubo.
Namhlanje sabona ikhandlela le-4H lisala i-25 kaFebruwari ukusinika ukuseta ukuba sihambe ixesha elide kwikhefu le-68.10. Akukho kwahluka kufunyenweyo kodwa ukudibana kwezi ndawo ziphakamileyo kunye nepivot yeveki kunye nokubuyiselwa kwe-38.2% kwentshukumo yokugqibela yongqinisiso olwaneleyo lokuqhubekeka okunokubakho ekuqhubekeni kwekhefu lolwakhiwo lwanamhlanje
I-Brent iyazama kwakhona iiveki ezidlulileyo
Ukuchasana okuphambili: 70.60 - 71.40
UBrent uphinde wachacha kwezi nyanga zimbalwa zidlulileyo kwaye sizama ukungena kule rally.
IBrent iyarhweba kwimarike eyakhiwe kakhulu kwaye ngoku iphinda iphinde ibeke umva kwiiveki ezidlulileyo.
Siza kulinda ukuphuka kweflegi ye-bullish kwi-bounce ye-2.618 yomlenze wokugqibela ukuze ungene kulo rhwebo lude.
Ngoku ukuba i-Brent yaphukile nge-lows siyakususa iodolo esalindileyo kwaye silinde ukutsalwa okutsha ukufumana ukungena kokuthenga okutsha kule marike kuba amandla apha makhulu.